China naịlọn gia maka igwe factory na suppliers | H & F.nylon
Ngwongwo naịlọn, dịka uru nke onwe ya nke ịdị arọ dị mfe, dị mfe nkwụsị, ezigbo nguzogide abrasion, ndụ ogologo ndụ. Ejirila nchebe nke akụkụ stell, na ụlọ ọrụ injinia ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri atọ, yana ahịa ya na-aba ụba maka nso nso a maka ọnụ ala na mmetọ dị ala na gburugburu ebe obibi.
Naịlọn gia tumadi etinyere na igwe gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ụdị igwe ọ bụla. Enwere ike iji gri naịlọn rụọ ọrụ na igwe igwe iji kesaa ike. Itinye ihe naịlọn nwere ike ichebe ngwa igwe maka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nyefee ike iji chụpụ igwe ahụ dum. Itinye nke naịlọn pole nwere ike onwe-lubrication n'etiti ejikọta akụkụ, ọzọ jụụ na-arụ ọrụ ọnọdụ, ala amị na-eri, ogologo ọrụ oge na ndị ọzọ ala na-eri na mgbe mmezi. N'afọ ndị gara aga, ndị injinia maara naanị na ọ bụ naanị akụkụ igwe na-eduzi nnyefe, ka ọtụtụ ihe ọhụrụ na-amalite imepụta, ngwaahịa nylon na-amalite ijide anya ndị mmadụ. A na-etinye akụkụ Nylon site na mmalite na ụlọ ọrụ kreenu ma emesịa jiri ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji melite arụmọrụ niile nke igwe.
Dị ka mmepe nke akụ na ụba ụwa, Nylon gears na-ekpuchi ọtụtụ ahịa ahịa nke mbụ e nwetara site na nchara. Ndị mmadụ maara na naịlọn gị na-anọchi ọla edo na ụlọ ọrụ bụ ihe na-ewu ewu. Ugbu a ojiji nke nylon gears nwere ike ọgaghị eru ọkara nke igwe ahụ, mana n'ọdịnihu dị nso, nịịl ga-ejide ojiji nke igwe ma mechaa hapụ ojiji nke ọla n'azụ.
Anyị huafu etinyela aka n'ịkwalite ndị ahịa anyị niile ka ha jiri nịịọn na-arụ ọrụ ha, Anyị kwenyere na ojiji nke nylon ga-abụwanye ewu ewu n'afọ ndị na-esote.
Nke gara aga: naịlọn pole e mere maka mbuli
Osote: Naịlọn belt pole mere na china
Naịlọn Helical Gears
Naịlọn Pinion Kwadobe
Naịlọn Plastic Kwadobe
Naịlọn Sprocket Gear
naịlọn ala na ngwaahịa
naịlọn Pin na elu ike
Cusomerized naịlọn mmịfe
pụrụ iche size naịlọn njikọ